Niyad jab ayay mar kale Theresa May kala kulmeysaa Baarlamaanka dalkeeda! – XOGMAAL.COM
Dhanka kale hogaamiyeyaasha Yurub ayaa sheegay in ay ka xun yihiin natiijada ka so baxday baarlamaanka Britain waxa ayna sheegeen in taasi sii kordhinayso cabsida laga qabo in Britain ay Midawga Yurub ka baxdo heshiis la’aan.
Xildhibaannada Britain ayaa ka soo horjeedsaday qorshihii u dambeeyay ee dawladdu ay ku doonaysay in looga baxo Midawga Yurub.
Ra’iisulwasaare Theresa May ayaa xaqiijisay in Baarlamaanku ay Arbacada u codayn doonaan in dalka uu Midawga Yurub ka boxo isagoon wax heshiis ah la galin Midawga Yurub. Haddii ay qorshahaas diidaanna ay xildhibaannadu Khamiista u codayn doonaan in dib loo dhigo qorshaha ka bixitaanka Midawga Yurub.
Maalin si wanaagsan ugu soo bilaabatay ra’iisalwasaare Theresa May ayaa ku dhamaatay guul darro iyo niyad jab. Mss May oo khubad ka hor jeedinaysay baarlamaanka ayaa sheegtay in ay aad uga carootay natiijadaasi.
Tirada xildhibaanadii codeeyay bishii Janaayo ayaa ka badnayd tan haatan,inkastoo ay weli badanyihiin sabatoo ah waxaa heshiiska May ka bixtaanka Britain ee Midawga Yurub ka codeeyay ilaa 149 xildhibaan.
Terry Reintke oo ka tirsan baarlaanka Yurub ayaa sheegtay arrinta ka bixtanka Britain ee Midawga Yurub ay jah wareer badan keentay.
Midowga Yurub oo Mamnuucay Diyaarada Boeing ee Ku buburtay Itoobiya